China Insecticide Alfa-cypermethrin 5% EC 5% WP 5% EW 10% 25% EC 5% WP CAS 67375-30-8 mveliso kunye nabenzi | I-Awiner Biotech
Inambuzane Beta-cypermethr ...
Insecticide Alfa-cypermeth ...
Isibulala-zinambuzane iAcetamiprid 20% ...
I-Alpha-cypermethrin 5% EC
I-Alpha-cypermethrin yobuGcisa: 90% TC, 92% TC, 95% TC
Iifomathi zeAlpha-cypermethrin: 5% EC, 10% EC, 20% EC, 5% WP, 5% SC
I-Alpha-cypermethrin ihlasela inkqubo yeenambuzane kunye neentsholongwane, ibangela ukukhubazeka kwiiyure ezimbalwa. Ukukhubazeka akunakubuyiselwa umva. I-Abamectin iyasebenza xa sele ityiwe (ityhefu esiswini) nangona kukho into ethile enxibelelana nayo. Ubuninzi
Ukufa kwenzeka kwiintsuku ezingama-3-4
IAlpha-cypermethrin ingasetyenziselwa ukulawula izitshabalalisi kwizityalo ezifana nekotoni, imifuno, imithi yeziqhamo, izityalo zeti, iimbotyi zesoya kunye neeswekile Iziphumo zolawulo lwe-LEPIDOPTERA, kunye nesiqingatha, iDiptera, i-ORTHOPTERA, i-COLEOPTERA, inquma kunye ne-HYMENOPTERA kwimithi yomqhaphu nakwiziqhamo. Ineziphumo ezizodwa kwi-bollworm yomqhaphu, i-Pectinophora gossypiella, i-aphis gossypii, i-litchi kunye ne-citrus Phyllocnistis citrella.
Ulwelo: 200Lt iplastiki okanye igubu lesinyithi,
20L, 10L, 5L iHDPE, FHDPE, Co-EX, PET igubu
1Lt, 500mL, 200mL, 100mL, 50mL iHDPE, FHDPE, Co-EX, PET ibhotile Shwabanisa film, umlinganiselo cap
Yomelele: 25kg, 20kg, 10kg, 5kg ifayibha igubu, ibhegi PP, ingxowa iphepha yobugcisa,
1kg, 500g, 200g, 100g, 50g, 20g ingxowa ngefoyile ye-aluminiyam.
Ibhokisi: iplastiki esongelwe ibhokisi
Iphakheji inokwenziwa njengemfuno yoMthengi.
Ukuzinza koGcino Uzinzile iminyaka emi-2 emva kokufumana i-odolo ukuba igcinwe phantsi kweemeko ezicetyiswayo. Emva kweminyaka emi-2, le khompawundi kufuneka iphinde ihlalutye ubumsulwa bamachiza ngaphambi kokuyisebenzisa.
Egqithileyo Insecticide Acephate 97% TC 75% SP 30% EC 95% SG CAS 30560-19-1
Okulandelayo: Insecticide Bacillus thuringiensis (BT) 32000 IUmg WP 16000 IUmg WP 8000IUmg WP CAS 68038-71-1
Insecticide Bacillus thuringiensis (BT) 32000 IU ...
Insecticide Acephate 97% TC 75% SP 30% EC 95% SG CA ...
Izinambuzane Abamectin 1.8% EC 50gl EC 36gl EC CA ...
Insecticide Aluminium phosphide 56% TB KH2PO3 CAS ...
Inambuzane yokubulala i-Acetamiprid 20% SP 5% EC CAS 135410 -...
Inambuzane iBifenthrin 97% TC 40% SC 2.5% EC 25% ...
Iilebhu ezisetyenziselwa uphando lwezenzululwazi zithatha iindlela ezininzi ngenxa yokwahluka. Sinikezela ngenkqubo yokubhobhoza ngokugqibeleleyo.
Umgangatho we-9, iZibuko leShishini laseCaiku, kwiSixeko saseShijiazhuang, kwiPhondo le-Hebei
IBifenthrin 25g / l EC, ICaptan 95% TC, I-Azoxystrobin 20% yeWDG, ICyproconazole 40% WDG, Amitraz 12.5% ​​EC, ICarbofuran 97% TC,